ရွှေမြန်မာမှ ကြိုဆိုပါတယ်: 2019
Posted by manawphyulay at 9:06 PM No comments:
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ရင်ခုန်သံ
ခုတစ်လောဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေထဲကနေ ပြန်လည်ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ခါတလေ ရေးစပ်တဲ့အရာတွေဟာ ကဗျာလား၊ စကားပြေလား နောက် ကာရန်နဘေ၊
လေးလုံးစပ်၊ ငါးလုံးစပ်လား၊ လေးချိုး၊ ဒွေးချိုး၊ မော်ဒန်ကဗျာလား စတဲ့ အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ဘယ်ထဲမှမပါရင် ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာသုံးသပ် ဆန်းစစ်ရင်း ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ စာတွေကို သတိရမိပါတယ်။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းဟာ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကြီး တာစူနေချိန်၊ နယ်ချဲ့ပယောဂကြောင့် ကုလားဗမာအဓိကဂုဏ်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှ စိတ်မအေးနိုင်လို့ လေးချိုးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တာကို တွေရှိရပါတယ်။
Posted by manawphyulay at 11:37 PM No comments:
Labels: ကဗျာ, ဗဟုသုတ, အတွေးအမြင်
ကြုံတွေ့နေရတာ မဟုတ်ကြောင်း သိထားစမ်းပါ….
ငါလည်းဘဲ သူလို နေနိုင်အောင် ကျင့်ရမယ်လေ….
တစ်ခါတလေ စိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကို ချရေးမိတာပါပဲ။
Posted by manawphyulay at 11:04 PM No comments:
Posted by manawphyulay at 11:01 PM No comments:
Posted by manawphyulay at 10:59 PM No comments:
မေ့မရနိုင် ၃ နှစ်တိုင်
အပိုစကားမဆို အပြုံးချိုချိုဖြင့်နှုတ်နည်းလွန်းတဲ့ ဖေဖေ
မေတ္တာဖြင့် သိမ်းသွင်း လမ်းမှားသွေဖယ်
အေးချမ်းစွာ ပြောဆိုတတ်တဲ့ ဖေဖေ
မနားတမ်း ရုန်းကန်ရင်း သူ့ဘဝကိုခင်း နင်းစေခဲ့သူ ... ဖေဖေ
ဖေဖေ့ ရဲ့ မေတ္တာတွေကို နိုင်းပြနေပေမယ့်
ဖေဖေ ဟာသားသမီးတွေကို ချစ်တယ်လို့ထုတ် မပြောခဲ့ တာ အမှန်ပါ
မြေးလေးပဲ ဂရုစိုက်ပါသမီးရယ်လို့ ရင်ထဲစကား ထုတ်ပြောခဲ့သည့် ဖေဖေ
ခုချိန်ထိ မေမေ ပြောနေတုန်းပဲ ဖေဖေ…
သမီးတို့မိသားစုရဲ့ အားငယ်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့
ဖေဖေ့ပုံရိပ်တွေထဲ ခုထိနိုးထဖို့ ခွန်အားမရှိသေးဘူး ဖေဖေ...
အပြုံးတစ်ခုနဲ့ ဘဝကို ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ဖေဖေ
အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေ
သည်းခံခြင်းကိုကျင့် မေတ္တာတရားပွား သဒ္ဒါတရားလည်းမရှားတဲ့ ဖေဖေ့အတွက်
ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ တရား ထာဝရဖေဖေ့အတွက် ဖြစ်ပါစေ...
ယနေ့အထိ ဖေဖေ့အေတွက်ရည်စူး ပြုပြုသမျှသော ကောင်းမှုကုသိုလ် တွေအတွက် ရောက်ရာ ဘဝကနေ သာဓုခေါ်ပါ ဖေဖေ…..
ဘာလိုလိုနဲ့ သမီးတို့ကို ဖေဖေခွဲခွာသွားခဲ့တာ ၆ ရက် မတ်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဆိုရင် သုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖေဖေ....
Posted by manawphyulay at 11:50 PM No comments:
Labels: ကဗျာ, အတွေးအမြင်